Translate Myanmar (Burmese) to Spanish | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Spanish, Myanmar (Burmese) to Spanish translations, Myanmar (Burmese) to Spanish Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Hola como estas
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? ¿Hay alguien?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Te quiero mucho tanto
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, ¿Cuánto cuesta esta hamburguesa?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? ¿Puedes llamarme un taxi?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး lo siento
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို estoy interesado
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Mi vuelo se retrasó
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Estoy aquí por negocios
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Hola, mi nombre es
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Lo siento, pero estoy casado
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် me gustaría preguntarte
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? ¿Puedes llevarme al aeropuerto?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ ¿Cuál es el momento en este momento, por favor?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? ¿Dónde está la estación de policía más cercana?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? ¿Puedo pedir prestado el cargador de su teléfono por favor?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? ¿Me puedes ayudar?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Pídeme un trago, por favor
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? ¿Cuanto cuesta?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Soy alérgico al gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Llameaun médico
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော ¿Hay un doctor?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? ¿Puedo tener una llamada?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Llámameatu jefe por favor.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Este lugar es muy lindo
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Llévame al hotel por favor
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? ¿Cuál es mi número de habitación?